Kooxda SSC Napoli oo lagu ganaaxey lacag dhan €35,000 oo euro (Maxaa dhacay?) – Gool FM
(Roma) 07 Abriil 2017 – Kooxda SSC Napoli ayaa lagu ganaaxey €35,000 oo euro kaddib markii uu taageere garoonka kusoo duuley kulankii ay Juve ugusoo baxday final-ka Coppa Italia, waloow ay kooxda Maurizio Sarri ku adkaatay 3-2 ciyaar ku qabsoontay Stadio San Paolo, taasoo Old Lady kusoo saartay 4-5 isu gayn ahaan.
Taageere ayaa garoonka soo galay isagoo doonayay inuu masar ay ku xardhan tahay kooxda Partenopei uu dusha ka saaro qannaaska Bianconeri ee Gonzalo Higuain, balse waxaa hakiyay kooxaha nidaamiyayaasha amaanka.
Galabta ayaa waxaa arrintaasi go’aan dhanka anshaxa ah kasoo saartay Lega Serie A waxayna ganaax gaaraya €35,000 oo euro gorodda u egliyeen Napoli oo lagu haysto inay ku fashilmeen inay “ninkan ka hor istaagaan inuu garoonka soo galo, isagoo ciyaarta joojiyay amin dhan 40 ilbiqirsi”.
Taageerayaasha Napoli ayaa sidoo kale la sheegay inay laacibiinta Juve iyo garsoorayaasha kusoo tuureen dhalooyin caagag ah, kuwaasoo ay qaarkood ku dheceen laacib Juve ka tirsan.
Dhanka anshaxa, Miralem Pjanic ayaa seego doona final-ka, halka Amadou Diawara uu ka maqnaan doono kulanka ugu horreeya ee ay Napoli ciyaarto Coppa Italia sanadka soo aaddan.